FantomCoin စျေး - အွန်လိုင်း FCN ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို FantomCoin (FCN)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ FantomCoin (FCN) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ FantomCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ FantomCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
FantomCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
FantomCoin FCN သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.121FantomCoin FCN သို့ ယူရိုEUR€0.103FantomCoin FCN သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.093FantomCoin FCN သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.111FantomCoin FCN သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.1FantomCoin FCN သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.768FantomCoin FCN သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč2.71FantomCoin FCN သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.454FantomCoin FCN သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.162FantomCoin FCN သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.17FantomCoin FCN သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$2.72FantomCoin FCN သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.941FantomCoin FCN သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.66FantomCoin FCN သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹9.11FantomCoin FCN သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.20.49FantomCoin FCN သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.167FantomCoin FCN သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.184FantomCoin FCN သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿3.79FantomCoin FCN သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.846FantomCoin FCN သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥12.87FantomCoin FCN သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩144.44FantomCoin FCN သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦46.65FantomCoin FCN သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽8.95FantomCoin FCN သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴3.37
FantomCoin FCN သို့ BitcoinBTC0.00001 FantomCoin FCN သို့ EthereumETH0.000313 FantomCoin FCN သို့ LitecoinLTC0.00214 FantomCoin FCN သို့ DigitalCashDASH0.00123 FantomCoin FCN သို့ MoneroXMR0.0013 FantomCoin FCN သို့ NxtNXT8.89 FantomCoin FCN သို့ Ethereum ClassicETC0.0177 FantomCoin FCN သို့ DogecoinDOGE35.87 FantomCoin FCN သို့ ZCashZEC0.00132 FantomCoin FCN သို့ BitsharesBTS4.64 FantomCoin FCN သို့ DigiByteDGB4.18 FantomCoin FCN သို့ RippleXRP0.421 FantomCoin FCN သို့ BitcoinDarkBTCD0.00414 FantomCoin FCN သို့ PeerCoinPPC0.395 FantomCoin FCN သို့ CraigsCoinCRAIG54.75 FantomCoin FCN သို့ BitstakeXBS5.12 FantomCoin FCN သို့ PayCoinXPY2.1 FantomCoin FCN သို့ ProsperCoinPRC15.08 FantomCoin FCN သို့ YbCoinYBC0.00006 FantomCoin FCN သို့ DarkKushDANK38.53 FantomCoin FCN သို့ GiveCoinGIVE260.08 FantomCoin FCN သို့ KoboCoinKOBO27.29 FantomCoin FCN သို့ DarkTokenDT0.112 FantomCoin FCN သို့ CETUS CoinCETI346.77